Madaxda Ahlu Sunna oo Isku-dhiibay Dowladda Soomaaliya |
Madaxda Ahlu Sunna oo Isku-dhiibay Dowladda Soomaaliya
Saraakiisha sare ururka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe ayaa saakay isu dhiibay ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxyar kadib markii ay xalay saqdii dhexe uu soo gaba gaboobay dagaal Khamiistii soo bilowday oo u dhaxeeyey maleeshiyaadka Ahlu Sunna iyo ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Dagaalada labada dhinac oo sidoo kale ka dhacay magaalada Guriceel ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof, oo labada dhinac iyo rayidba isugu jiray. 18 ka mid ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen magaalada Dhuusamareb.
Wariyaheenna gobollada dhexe ayaa kusoo warramaya in saraakiisha sare ee Ahlu Sunna hadda lagu hayo xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah mas’uuliyiinta saree e Ahlu Sunna ayaa sheegay in in malayshiyaadkooda iyo hubkoodiiba ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya gaar ahaana taliya guutada 15aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame. Waxa uu sheegay in taliye Mascuud uu qaaday mas’uuliyadda amaanka madaxda ururka Ahlu Sunna.
Ururka Ahlu Sunna ayaa muddo sanada ahba maamulayay magaalada Dhuusarameeb, kadib markii ay marar badan dagaal la galeen ururuka Al Shabaab.